Ama-Swivel Bathroom Faucets Brush Nickel
Ikhaya / Amanzi okugeza / Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza / I-WOWOW Centerset Bathroom Faucet Enomhlangano We-Pop-Up Drain
Kulinganiselwe ngo- 4.85 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 26 izilinganiso ikhasimende
(26 Izibuyekezo ikhasimende)
imininingwane yesekhethi yokugezela yasendaweni:
4-ku-Center indawo ubakaki
Umhlangano wokukhipha insimbi
I-AdA ehambisanayo i-lever isingatha ukusetshenziswa kalula
Kufakwe isigxobo esiphakeme
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sokugezela sikasinki womkhumbi 2320400 asisoze saletha izinkinga ezimile.
I-electroplated ngeqedi, isikebhe sokugeza sokucwilisa umkhumbi asitholi i-oxidization.
Ukuqoqwa kokugeleza kokukhishwa kwePush & Seal Pop-up okuthuthukisiwe kanye namapayipi okusabalalisa ompompi anelayisense we-cUPC afakiwe.
Isikhala esikhulu se-arc sinikeza ukucaciseleka okwengeziwe kanye nokufinyeleleka okukhulu echibini.
Ibakaki le-3-hole eline-4-intshi yesizinda sesetter yokufakwa okulula. Ubukhulu be-Hole: 30-36mm; Ubunzima beMax Deck: 30mm.
Izibambo ezimbili ze-lever zokugeleza okulula nokulawula amazinga okushisa.
Ukwakhiwa kokuqala kwezinto ezibonakalayo kwe-premium kufinyelelwe ekugcineni kwe-nickel ukuze kuhlale futhi kuthembekile.
SKU: 2321400 Categories: Amanzi okugeza, Ukuphathwa Kwamabili Okuthinta Ukugeza Tags: 2 Bamba, 4 ye-intshi, I-Nickel ehlutshiwe
Okokuqala, ngineminyaka engama-80 ubudala hhayi uplamba. Ingxenye ebinzima kakhulu yephrojekthi bekuwukususa ompompi bakudala. Oompompi abasha be-WOWOW basekhwalithi enhle, intengo enhle kakhulu, iyakhanga, futhi konke okudingekayo kulo msebenzi kufakiwe okwenza umsebenzi ube lula kakhulu kwabakwa-DIY. Ngingawuncoma kakhulu lo mkhiqizo.
Kubukeka kukuhle ngephuzu lentengo. Ngifisa sengathi igama lomkhiqizo lingabonakali, kodwa akuyona into enkulu kakhulu. I-nickel eshaywayo ifana nezinye izesekeli ze-nickel ezinamabhulashi enginazo. Ukufakwa kwakulula futhi zonke izingxenye zafakwa.
Ukufaka okuqondile okuqondile. Izibambo zihamba ngokushelela kakhulu, zibukeka zizinhle impela. Ukuvunyelwa okwengeziwe ngenxa yesango eliphakeme ompompi, kuvumela negumbi elithe xaxa lokwenza izinto kusinki (ukuwashwa kwezingubo, ukuxubha izixubho zamazinyo, njll) ukushaya ompompi, engikuthandayo; kusho izinto ezingatheni ezingaxhumana nokuthi amanzi aphuma kuphi, okukhipha ihlanzeke kangaka.
Ngenze izivivinyo eziningi ompompi ezitolo ezimbalwa zokulungisa ikhaya futhi kumele ngisho ukuthi le ompompi ibonakala ingenziwa ngcono kunalezo ezibiza kakhulu. Ngamangala. Kusinda impela futhi ama-valve avuleka ngokushelela futhi avale ngokuzizwa okuhle futhi. Ngihlabeke umxhwele kuze kube manje. Ngizobe ngithenga amasethi ambalwa alawa maduze.
okungabizi, okunesitayela, okwenziwe kahle ngombhobho. Bekulula kakhulu ukuyifaka futhi ngineziyalezo uma kungenzeka uzidinge. Ngikulungele uku-oda okuningi ukuze ngithathe indawo yompompi bendawo yokugezela ekhaya lami. Intengo impela. Kubukeka njengompompi ababizayo kodwa kushibhile kakhulu kepha abadelanga ukwakhiwa kompompi.
Umpompi ubukeka umuhle. Ngizo-oda eyesibili kwenye indlu yami yokugezela. Njengoba ngishilo, ngiyawuthanda umpompi futhi manje ngikhipha idreyini entsha, ngenjabulo ngiwunikeza lo Mkhiqizo izinkanyezi ezinhlanu.
Ngemuva kokufunda ukubuyekezwa nokuqhathanisa imikhiqizo sathenga le nto yokugezela ukuze sithathe indawo yethu endala. Kwakulula kakhulu ukufaka futhi ukwakheka okulula kakhulu okulula kakhulu ukugcina kuhlanzekile. Sikuthengile lokhu ngesiliva elicasuliwe le ngxenye ibukeka iyinhle endlini yethu yokugezela.
Sisanda kuthenga indlu futhi besidinga ukufaka ompompi. Ngikuthengile lokhu futhi bekukulungele kahle. Ngafika nakho konke engangikudinga. Kulula ukuyifaka futhi ibukeka ilula kakhulu.
Angazi ukuthi ngithini okunye… kodwa ngiyayithanda le ompompi! Lokhu kubuyekeza kungokwesithathu kwami ​​kulokhu. Ngithenge eyokuqala esikhathini esingaphezu konyaka odlule futhi isalokhu iqinile futhi iqinile futhi inezingane endlini! Ibibambe kahle kakhulu ngaze ngathenga eyesi-3. Bengizothola okwehlukile kusinki wokugezela oyinhloko, kepha njengoba le ompompi ibiyinhle kakhulu kimi, futhi ibukeka ibiza, ngicabange ukuthi manginamathele kuyo! Futhi ngiyajabula ngokuthi ngenzile. Ukube benginosinki wesi-1, bengizowuthenga futhi!
Ukulethwa okusheshayo namayunithi asebenze kahle. Bezithuthukisiwe kakhulu ziye kwi-lever endala ye-20 yr, ompompi bepulasitiki. I-shutoff iqinile kakhulu ngaphandle kokuconsa noma yini. Ngamanani, angiboni ukuthi umuntu angalahlekelwa kanjani ukuthenga la ompompi.
Ngangijabule kakhulu ngokuthengwa kompompi wokugezela. Ikhwalithi ihle kakhulu. Kwakulula ukuyifaka futhi yayihlanganisa zonke izingxenye ozidingayo ukwenza lo msebenzi. Ibukeka kahle kakhulu futhi ifana kahle nazo zonke ezinye izinto ezakhiwe nge-nickel endlini yami yokugezela. Angingabazi ukuthi le ompompi izohlala iminyaka eminingi.
Ipayipi lokugezela elincane nelisebenzayo.
Ilingana ngokuphelele nalokhu okuyize.
Ngempela udinga kuphela izandla zakho kanye nokusonta okulungiswayo. Ama-plumbers putty ne-tape kwakungadingeki nhlobo, akukho ukuvuza noma yini. kubukeka buhle futhi buhle.
Ompompi Nice, ukubukeka okukhulu. Bengifuna izibambo ezihlukene ezishisayo / ezibandayo njengoba bengingaqiniseki ngesibambo esisodwa esingavuzi. Ngale ndlela ngingaqiniseka ukuthi zombili izinhlangothi zivikeleke kahle. (usebenzisa ipayipi tape kunjalo) Ukufakwa okulula. Isebenza kahle. Izibambo ziphenduka njengomoya. Faka usinki wami ngokuphelele. Futhi zazingabizi ngentengo. Ngathenga ezimbili.
Kuhle kakhulu ukuthi sithenge ezimbili, eyodwa ngendlu yokugezela ngayinye. Kuhle. Ukubukeka okuqinile. Ngiyayithanda indlela ompompi ophakeme ngayo wokugcwalisa isihlanganisi sethu.
Lena ompompi omkhulu ngentengo enhle kakhulu! Kuthathe ubaba cishe imizuzu engama-30 ukwenza ompompi aba-2. Ngi-ode ingxenye yesithathu yokugezela izivakashi zethu futhi ngisalinde ngabomvu umyeni wami ukuyifaka esikhundleni sayo. Besingenazo izingqinamba kuze kube manje. Ngithanda ukukhipha pop up!
Lokhu kubukeka kukuhle futhi intengo yinhle. Ngishintshe wonke amasinki ezindaweni zami zokugezela ngalawa (angama-8 esewonke). Kubukeka kukuhle futhi ukufakwa bekuqonde ngqo kumfana onjengami owenza umsebenzi wamapayipi okokuqala. Iza nesitobha esisezingeni eliphakeme esibuye sibe yi-nickel futhi nekhwalithi yamapayipi yinhle.
Le ompompi inhle kakhulu. Yenziwe kahle, kulula ukuyifaka, futhi isebenza kahle kakhulu. Idizayini ye-pop-drain kulula kakhulu ukuyifaka kunamapayipi wesitayela sakudala. Ngizotholela abambalwa indlu yonke.
Kulula ukufaka. Kubukeka kukuhle kakhulu. Akukho okuthathekisayo kepha kubukeka kahle. Kulula ukuyisebenzisa.
Ngathenga le ompompi yendlu yethu eqashisayo futhi ngafaka indodana yami ukuyifaka. Akakaze enze ukufaka kompompi kodwa wakuthola kulula kakhulu futhi kuyashesha. Futhi kubukeka kukuhle.
Lawa ompompi abahle nentengo enhle impela. Azilutho neze kodwa zibiza kakhulu uma ubheka ukuthuthukisa izindlu zakho zangasese. Bekungelula kakhulu ukufaka futhi kubonakale kuqinile futhi kusebenza kahle impela
Ngithenge lokhu ngicabanga ukuthi ngizokuthola engikukhokhele, ngendlu yethu yokugezela eyengeziwe. Ngithole imali engaphezulu kwengikukhokhele. empeleni kubukeka futhi kuzwakala kufana negama elibizayo lomkhiqizo weyunithi engiyithengele indlu yokugezela enkulu. ngijabule kakhulu. sizothenga kusuka futhi, ukwahlulela kusuka kwikhwalithi ngeke kube isikhathi eside ngaphandle kokuthi ngidinga okunye.
Yize kunenani elifanele, lo mkhiqizo weqa engikulindele. Kulula kakhulu ukufaka futhi kuyasebenza futhi kubukeka kukuhle.
Sishintshe yonke ompompi abakuzo zonke izindlu zethu zangasese ngalezi. Kulula ukuyifaka-ilula kakhulu kuneyokuqala esiyithenge esitolo sethu sezingxenyekazi zekhompuyutha! Ukuphakama okuhle kombhobho wokugezela futhi.
Umyeni wami uzifake ngokushesha okukhulu, ingxenye ebinzima kakhulu bekususa ezindala. Ziyinsimbi enhle nesindayo, umbala muhle. Izibambo zincane kancane, kepha ukuphakama kompompi kuyakwenzela. Lokhu kulungile ukukwazi ukugeza ubuso bakho kusinki ngaphandle kokubeka ubuso bakho phansi kusinki. Sathenga eyodwa yokugezela yabafana bethu, sayithanda kakhulu sathenga ezimbili senzela inkosi yethu.
Lo ngumkhiqizo owenziwe kahle kakhulu, angihlali ngenza izibuyekezo kepha lo mkhiqizo wawungahlukile ngoba wawunamapayipi amasha aqinile aya ompompi. Lokhu bekungalindelekile futhi kwaziswa kakhulu. bekulula ukuyifaka futhi akuvuzi.